Vidiyo 11 - Schoolslọ akwụkwọ nchekwa - Ihe ọ pụtara. | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidiyo 11 - Schoolslọ akwụkwọ nchekwa - Ihe ọ pụtara.
Schoolslọ akwụkwọ na-adịghị nchebe - Ihe ọ pụtara / Site mere
Site n'aka Prọfesọ John Whitehall.
11 vidiyo - Dysphoria nke Nwata.
Schoolslọ akwụkwọ na-adịghị nchebe - Ihe ọ pụtara.
Mara Nke Edita: Edere vidiyo a na Australia na November 2018, tupu nhoputa ndi ochichi obodo Victoria na ntuli aka ochichi. Ọ bụrụ na ndị ahọpụtara na ngalaba Ndị Ọrụ Ọstrelia kwere nkwa na ha ga-agbagha usoro ọgwụgwọ ntụgharị, ebumnuche a na - akpọkarị ndụmọdụ gbasara mmụọ maka ndagide ndị nwoke. Emere ntuli aka Victoria na Nov 2018. A họpụtara Victoria Labour Party mana a họpụtaghị Federal Labour ma yabụ ibuso ndị ndụmọdụ na Australia ka a kwụsịtụrụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ maka ọdịnihu anya. Na Victoria, ihe iyi egwu ndị dọkịta na-edebanye aha maka imegide echiche nke okike dị adị. Ihe iyi egwu a na-aga n'ihu Australia ka obodo ndị ọzọ ji nwayọọ nwayọọ gbochie ndụmọdụ dị na ya.
Nke a bụ ihe ideological na karịrị anyị. Believesnye kwenyere na ihe a bụ ajụjụ na-esonụ? Kedu echiche? Isnye na-eme nke a na gịnị kpatara ya? Ebee ka nke a bilitere? Otu okwu doro anya. Echeghị m n'ezie na nke a bụ ọtụtụ okwu, mana ọ bụ n'ezie okwu a ma ama.
Gọọmentị ndị Victoria nyere iwu ka edee akwụkwọ mmemme izizi nke ụlọ akwụkwọ a maka ụlọ akwụkwọ gbasara mmekọahụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ha chọrọ ịkpọ ya, na Mahadum Latrobe. Otu n'ime ndị isi ya bụ nwanyị aha ya bụ Roz Ward na Roz Ward, na-ekwu okwu na nzukọ Marxist na-ekwu ihe ndị a gbasara usoro mmemme Schoolslọ Akwụkwọ Nchekwa. Kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe ọ bụ! “Ọ bụghị banyere ịkwụsị iji ike emegbu mmadụ, kama ọ bụ ịkwado ihe ekike na ụdị mmekọahụ dị iche iche.” Ọ bụkwa onye edemede kachasị ama na nke a. N'ihi gịnị? Kedu ihe ị chọrọ ime? N'ihi na ị na-esogbu onwe gị maka Marxism. M kwuru, “Ime ka ọrụ ike mmadụ na-arụ ọrụ ya mee ka arụrụala anyị pụta, uru anyị, mmekọahụ na njirimara nwoke na nwanyị na arụrụala anyị arụrụala. Na ime ka anyị bie n ’ụlọ pere mpe na ezinaụlọ.” Yabụ, ọ na-eche ma ọ bụrụ na ị bibie ezinụlọ, nke a ka e zoro aka na Marxist, ihe ngosi Karl Marx nke iri na asatọ na iri anọ na asatọ, mbibi nke ezinụlọ.
Ugbu a o kwuru na ọ na-adabasị na usoro bourgeois na-agbanyeghị, ha na-echekwa ya, mana nke a bụ akụkụ dị mkpa nke mgbanwe ahụ iji wee ruo ọkwa dị elu nke komunizim, nke dị n'okpuru nduzi nke ndị Kọmunist. Roz Ward kwuru, sị: "Ọ bụghị naanị na m kuziri ndị mmadụ ka ha ga-esi bụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. “M na-akụziri ha otú ha ga-esi bụrụ nwoke ma ọ bụ nwanyị na ndị Kọmunist.” Yabụ, ịnweghị ike ịmatakwu ihe ọ bụla.
Ugbu a echeghị m na nke a bụ isi okwu, mana ọ bụ isi, na-achịkwa, na-eduzi ike maka ụfọdụ ndị nọ na ya. Ya mere, olee ihe ndị ọzọ nwere ike ịbụ? Echere m na ndị ọzọ abụrụla ndị kwere ekwe n'echiche nke oke mmiri nke nwoke na nwanyị dịka ekwupụtara, dịka ọmụmaatụ, site n'aka Alfred Kinsey. O dere akwukwo banyere nmekorita nwoke na nwanyi na iri na iteghete. Ihe dị mkpa Kinsey ji were ozi ụlọ bụ na orgasm bụ orgasm, ọ gbasaghị onye ma ọ bụ ihe ị nwetara ya. Nke a bụ nkuzi nke ihe ọ kpọrọ mmekọ nwoke na nwanyị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, agụụ mmekọahụ kwesịrị igosipụta ma mee ya ma mezuo n'ụzọ ọ bụla ịchọrọ ya. Ọ bụ otu ihe ahụ, ọ dịghị ụkpụrụ ọ bụla dị na ya. N'ezie, omume, nsogbu a sitere n'echiche Judeo-Christianity, nke ga-egbochi nke a.
Ọ bụ onye ahụ kwuru na e nwere ụdịdị dị iche iche site na nwoke idina ụdị onwe ya na ịbụ nwoke na nwoke na nwanyị na-arụrịta ụka gbasara ụmụ nwoke America, ebe dị n'etiti. Yabụ, ọ tinyeghị ndị transgere na nke ahụ n'ihi na echere m na nke ahụ bụ ọhụụ mmekọrịta ọha na nso nso a. Mana ọ bụ ya kpatara maka echiche a na ọ dịghị ihe dị ka ọnụọgụ abụọ nke nwoke na nwanyị. Ma e nwere ụdịdị dị iche iche n'etiti. Isi ya gara n'ihu kwuo na nwoke na nwanyị niile bụ otu, ọ baghị uru, enweghị ụkpụrụ ọ bụla. A gosiputara nke a na echiche nke oke mmiri. Ma ebe onye Marxist tinyekwuru ụtọ na ya, echere m na mmadụ ole na ole na-etinye aka, nwee ntụkwasị obi na echiche a, ma bụrụkwa onye maara ihe nke na-abanye n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na gọọmentị na ihe ndị ọzọ, na ndị ọzọ n'ime anyị anaghị mara ihe ha na-ekwu.
Nke abuo, achoghi inwe ihe mgbu nke ikwu, "ekwenyeghi m na nke a bụ ihe ọjọọ ma achọghị m ka ụmụ m soro." Echere m na otu a ka ha siri nweta ọsọ ọsọ. Anyị anaghị aghọta ihe ha na-eme. Point otu.
Isi nke abụọ. Ọ bụrụ na i tinye isi gị n'elu ihe mkpuchi ahụ, mgbe ahụ ha nwere ụzọ ha lekwasịrị anya isi mee nke ahụ okwu na-egbu mgbu. Gịnị ka anyị ga-eme maka ya? Nke a ọ bụ ihe anyị chọrọ maka ụmụ anyị? M ga-asị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ achọghị nke a. Yabụ kedu ka anyị ga - esi mee ya? Anyị kwesịrị ịmụta banyere ya? Anyị kwesịrị ịma na ọ dị adị. Anyị kwesịrị ịmata ka esi akụziri ya ụmụ anyị.
Olee otú anyị ga-esi mee ya? Ọfọn, site na ịme vidiyo a, enwere m ike ịgbado isi m n'elu ihe mkpuchi ahụ? Ọfọn, nke ahụ ga-ekwe omume, n'ihi na na Victoria enwere iwu, Iwu Mkpesa Ahụike, bụ nke e gosipụtara na Jenụwarị ma ọ bụ February puku abụọ na iri na asaa. Mịnịsta na-ahụ maka ahụike na Victoria kwuru na mmetụta ahụ, "Otu n'ime ihe gbasara omume a bụ ikike ya, ebumnuche ya, bụ ịkwụsị usoro ntụgharị ntụgharị." Kedu ihe nke ahụ pụtara n'ụwa? Nke ahụ chọrọ mgbasa. Nke ahụ bụ Orwellian nke nke George Orwell dere bụ onye dere akwụkwọ, iri na itoolu na iri asatọ na anọ ka a kpọrọ ya, na echiche bụ na ịchịkwa ndị mmadụ, okwu pụtara n'ụzọ dị iche. Yabụ, mgbe ha na-akwụsị ọgwụgwọ ntụgharị, ihe ha na-eme bụ na ha na-ezube ịkwụsị onye ọ bụla ị na-aga n'okporo ụzọ ma ọ bụ onye ọ bụla na-anwa ịgbanwe ụdị okike na njirimara nke amụrụ ya.
Yabụ, ị hụla site na ọrụ ma ọ bụ hapụ, ọ bụrụ na ị kpọtara m nwatakịrị nwoke nwere ọnya dysphoria, ọ bụrụ na m sị, “Chere, nọdụ ihe a, ọ ga-aka mma. Naanị chere, dị ọmịiko na ihe niile. Chere ma lelee, nwee ọmịiko, hụ nwata n'anya ga-esi na ya pụta. ” Ana m eme mmehie nke omission n'ihi na anaghị m eduzi nwa ahụ n'ụzọ nkwenye. Nke ahụ bụ na Victoria.
Labortù Federal Labour Party nwere otu n'ime nyiwe ya na ọ bụrụ na ọ banye n'ike n'afọ na-abịa na ọ ga-amachibido ọgwụgwọ ntụgharị / nkwụghachi. Katherine King bụ onyinyo minista maka ahụike, na-ekwu na ọ ga-eme nke a okwu nke onwe. Ugbu a, enwere ihe ndị ọzọ? Ee, enwere ihe. Dị ka ọmụmaatụ, ntuziaka apụtawo na Ngalaba Mmụta Mmụta nke New South Wales na-echetara ndị nkuzi maka ibu ọrụ ha n'ihe gbasara ịkọ akụkọ metụtara iwu gbasara mmekpa ahụ ụmụaka. Ọ dị mma, ọ bụrụ na nwatakịrị ewere ọnya ma ọnweghị nkọwa nyere ya, ị ga-akọrọ ya. Ma gịnị ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ abata ma yie ka ọ nwere mgbagwoju anya banyere okike? Ọ na-eche na ya nwere ike ịbụ nwa agbọghọ, ọbụghị nwata nwoke, na a kuzịkwara ndị nkuzi ihe ndị a niile, ha niile edozila, malite, dịrị njikere iji nke a. Nwatakịrị a batara, maọbụ ọ bụrụ na ị nwere onye na-agba izu nwoke na-abịa n'ụlọ akwụkwọ na narị dollar asaa n'otu awa iji kụziere ndị nkuzi nkuzi nkuzi banyere otu esi amata nsogbu a, gị dịka onye nkuzi ghọtara, yabụ, nke ahụ nwatakịrị nwere mgbagwoju anya banyere okike ya. Have nwere ọrụ dịịrị gị ịkọ, ma ọ dịkarịa ala kọọrọ ndị nne na nna, ma ọ bụrụ na ndị nne na nna anaghị enwe ọmịiko na nke a, gwa ndị ọchịchị ka elu. Yabụ, nke a abanyela n'ụlọ akwụkwọ.
Yabụ, anyị ekwuola maka otu ndị ọrụ Victoria. Anyị ekwuola banyere Federal Labour Party. Anyị ekwuola banyere ntuziaka New South Wales. Gịnị banyere aboutlọ Ọrụ Ahụ Ike n'onwe ya? Ndị Ọgwụ Ahụike nke Australia ka natara ntinye nke a ga-atụle ụkpụrụ omume ọhụrụ. N'ebe nke Point 2.1 bu okwu banyere oru aka oru, ma oburu na m nwere ike icheta nke a, o kwuru na ndi dibia nwere ike ima aka na nsogbu nke oru ma oburu na o mee nkwuputa ndi mmadu megide amamihe nke oru a ma ya mere o wetara oru a ihe ojoo. site n'ibelata ntụkwasị obi obodo. Yabụ, site na ịme vidiyo a, enwere m ike imegide ọtụtụ echiche nke ndị ibe m, onye maara? Anyị amaghị ihe echiche bụ, mana anyị maara na enwere ụlọ ọgwụ dysphoria nke nwoke na nwanyị na-ada oke ụda, na-anụ olu. Ha nwere ike ịsị, “Ọ dị mma, anyị abanyela ebe a. Anyị bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ nke echiche. Onwebeghị onye kwuru na anyị emehiela. Ị nwetaghị ya. Are bụ olu dịpụrụ adịpụ ma ị na-agbagha ndị mmadụ ma ị na-ebelata ntụkwasị obi obodo, "Ya mere, ya na ihe ịma aka dị iche iche nke ọkachamara, nke nwere ike ịga n'ụzọ niile.
Enwere ọtụtụ ihe na ya, n'ihi na echere m na ọ bụ akụkụ nke anọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla karịa nke a, ọ kọwara ya karịa. O kwuru na ọkachamara metụtara ọrụ nke ijide n'aka na ndị mmadụ chere na ọ dị mma na ọdịbendị ha. Yabụ, site na ịme vidiyo ndị a na igosipụta nkọcha m na-enwe banyere dysphoria nke nwoke, enwere ike ịnakọta nke a site na nne, dịka ọmụmaatụ, onye gabigara nsogbu niile n'ihi ịhụnanya na nlekọta. Ọ abanyela n'okporo ụzọ ọgwụgwọ, nke ịhụnanya na nlekọta nke ụlọ ọgwụ ụmụaka na-elekọta.
Ma, ana m ekwu, “Ọ dị mma, chere nke abụọ, ọnụ ọgụgụ ahụ bụ na nwatakịrị a ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị chere. Ma lee, ha na-ekwu na ọgwụ ndị ahụ adịghị mma, enweghị mmetụta ọ bụla, mana m na-atụ gị aka n'akwụkwọ mba ofesi na-ekwu nke ahụ. Say na-ekwu na ị na-enye mkpụrụ ọgwụ ndị a ka i wee nyekwuo nwa ahụ ohere ka ọ chee echiche, m na-ekwu na mkpụrụ ọgwụ ndị ahụ ga-egbochi echiche nke ịgwọ ọrịa bara uru.
Ya mere, gịnị ka m na-eme? M na-agbagha ọrụ na ọrụ nne ahụ nwere mkpebi niile kacha mma maka nwa ya. Ana m eme ka ọ ghara ịdị ize ndụ na ọdịbendị. Ọ ga - enwerịrị, ọ bụrụ na iwu ọhụrụ ahụ abanye, ọ ga - eme ụfọdụ ụdị mkpesa na ndị dị ka m ga - akwụ ụgwọ ị kpọta ya na bọọdụ ahụ.
Yabụ, ọ bụrụ na Labour Party, Federal Labour Party abanye, m agaghị aga n'ihu na nke a, enwere m ike ịpụ iwu, yana ọ bụrụ na Kọmitii Ahụike abata, nke ọzọ bụ na enwere ike ịdebanye aha m. N'ihi ya enwere m ike ịtụ anya na agaghị m enwe ike ịgwọ ọrịa n'ụlọ mkpọrọ
Vidio 11 - Schoolslọ akwụkwọ na - echekwa - Ihe ọ pụtara - Pịa> Iji budata PDF ebe a.
Pịa> Iji nweta onye ntụgharị okwu na ntanetị n'asụsụ gị.
Vidiyo a na iri na otu nke ọzọ na Childhood Gys Dysphoria na ọtụtụ ozi ndị ọzọ nwere ike ịchọta na weebụsaịtị anyị.
Weebụsaịtị URL: https://www.stopsafeschools.com/
Copyright CAUSE (Coalition megide Educationkụzi Mmekọahụ Adịghị Eche) 2018.